Vaovao songadina Archives -
Epp Antanimbarinandriana : Nahitana “ody gasy” sy lamokan’atody
21/03/2017 admintriatra 0
Lasa lavitra ny sotasotan’ny Cua momba ny ady tany etsy Antanimbarinandriana. Tonga hatrany amin’ny fampiasana “ody gasy mihitsy”. Omaly tokony ho tamin’ny 4 ora hariva, raha iny niasa teo amin’ny zaridaina manodidina an’io Epp Antanimbarinandriana …Tohiny
Takaitra navelan’i Enawo : Tafakatra 50 ireo namoy ny ainy
Tafakatra 50 ireo olona maty tao anatin’ny distrika 58 nahavita ny tatitra mahakasika ny takaitra navelan’ny rivodoza raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny sampandraharaha nasionaly misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC ny sabotsy lasa …Tohiny
Fanafihana teny Ambohimanarina : Niboraka ny tsinain’ilay mpamily
Lehilahy iray, mpamily irony fiara “personnel”, ana orinasa iray eto an-drenivohitra no nipotsaka tsinay , vokatry ny fanafihana nataona andian-dehilahy teny Ambohimanarina , ny sabotsy alina, tokony ho tamin’ny 10 ora tany ho any. Iny …Tohiny
15/02/2017 admintriatra 0
Hikopaka elatra. Niasa tao anatin’ny trano mpamokatra hivondronana mpanakanto maromaro, Gasy Ploit, taoriana kelin’ny nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika i Agrad sy Skaiz. Ho taonan’ny fahaleovantena ity taona ity ho azy mirahalahy satria hisintaka …Tohiny
HVM Analamanga : Manameloka ny fampihorohoroana
Manoloana ny asa fampihorohoroana tamin’ny alalan’ny fanapoahana grenady nataon’olon-tsy fantatra tetsy amin’ny birao foiben’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) etsy Antanimena, ny alin’ny sabotsy 24 marsa teo, dia nanao fanambarana ny avy amin’ny ...Tohiny
Biraon’ny SMM : Tokony hametra-pialana !